Jarmalka oo la sheegay in uu taaggeeri doono Dawlad ka dhalata shirka Soomaalida.
Gudoomiyaha Ururka saaxiibtinimada jarmalka iyo soomaalida ee fadhigiisu yahay magaalada farnkford ee dalka Jarmalka Mr Ibraahim Cali Xasan ayaa waxaa uu sheegay in dawlada jarmalka ay diyaar u tahay in ay caawiso dawlad ka dhalata dalka soomaaliya iyo wax u qabashada bulshada soomaaliyeed. iyadoo dhinaca kalana aysan ka quusanayn rajo marwalba ay muujinayaan.
waxaa kaloo uu sheegay Gudaamiyaha ururkan oo dhowaan aan ku waraystay isaga oo ku sugnaa Magaalada London in ay shir la yeesheen masuuliyiin Jarmal ah iyo ururada soomaaliyeed ee dalkan oo ay kala hadlayeen dadaalka ay ugu jiraan nabadda isla markaana ay ka qaybgalayaan shirka soomaalida ee la filayo in 19ka bishan la dhaariyo xubnaha barlamaanka soomaaliyeed.
Horay ayaa ururkan intii u dhexaysay 7 February ee sanadkan ilaa 2dii March ay booqdeen shirka soomaaliyeed xiligaas oo rajo wanaagsan laga qabay in la soo afjaro shirka hase yeeshee uu dib u dhac ku yimid kadib markii cakirnaan ay soo wajahday.
Ururka Saaxiibtinimada Jarmalka iyo Soomaalida oo loo aas aasay in uu caawiyo soomaalida dalkaasi waxaa la'aas aasay sanadkii 1993 , waxaana xiligaas ay sameeyeen banaan baxyo ay uga soo horjeedeen sharci kasoo baxay dawladda oo ku saabsanaa in qofkii ka yimaada dal kale oo qaxootinimo soo doonta lagu celinkaro halkii uu ka yimid.
Waxaa jira mudooyinkan danbe dadaalo ay muujinayaan soomaalida qurbaha iyo ururada soomaaliyeed ee ka jira guud ahaan dalalka yurub taasi oo ah dadaalka ay ku muujinayaan in la helo dawlad soomaaliyeed oo ka dhalata shirka dib u heshiisiinta ee ka furmay Nairobi 15kii October 2002.